Maitiro ekukanganwa waunoda ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Kukanganwa sei waunoda
5 Kuverenga Min
Kukanganwa sei waunoda. Tese takambodanana pane imwe nguva muhupenyu hwedu. Adventures, kuseka, kudya kwemanheru, kutsamwa, ... Kurarama nguva dzakakosha nemumwe munhu uye usingadi kuti zvirege kupera, asi zvinosuruvarisa kuti izvi hazvisi nguva dzose.
Kunyangwe zvingave zvakanaka kuwana munhu akakwana kwehupenyu, haisi nguva dzose inowanikwa. Iwe unogona kunge usina zvinangwa zvakafanana kana hupenyu hwako hunofanira kungoparadzaniswa. Apa ndipo panouya dambudziko guru, ungakanganwa sei waunoda?
Munyaya ino tichapa akatevedzana mazano kuti kukubatsira kukanganwa rudo rwekare uye kuti unogona kuenderera mberi, unoshinga kuiverenga here?
Indekisi yezviri mukati
1 Nzira yekukanganwa waunoda nhanho nhanho
1.1 1. Dimbura kukurukurirana
1.2 2. Hachidzivisiki kufunga nezvomumwe munhu
1.3 3. Funga nezvako
1.4 4. Taura nemunhu waunovimba naye
1.5 5. Wana kufemerwa nevanhu vakakunda
1.6 6. Shivirira marwadzo
1.7 7. Tarisa pane zvazvino
1.8 8. Rangarira zvikanganiso zve ex wako
1.9 9. Isa mari mune zvaunoda
1.10 10. Usazvipa mhosva
1.11 11. Ita zvitsinga zvekukanganwa waunoda
1.12 12. Munamato
Nzira yekukanganwa waunoda nhanho nhanho
Tevere isu tichaenda kukupa iwe 12 tips kuitira kuti uite uye iwe ugone kuzadzisa chinangwa chako chekukanganwa waunoda uye iwe unogona kuenderera nehupenyu hwako.
1. Dimbura kukurukurirana
Mazano ekutanga atinokupa ekuti ukanganwe waunoda kugura kutaurirana naex . Zvingave zviri mumunhu, pasocial media, kana parunhare, kuramba muchibatana mushure mekurambana kunongovhura maronda ako. Vanhu vazhinji vanoregeredza danho iri uye vanogona kudzoka zvakare, vachiisa parutivi kuporeswa kwavo mupfungwa kuti vadzore vaimbova wavo.
Kana iwe usingakwanisi kugura kutaurirana, iwe haungakanganwi rudo urwu, kunyange kana hukama hwacho hwairwadza. Uyezve, unofanira bvisa zvinhu nezvipo kuti akakupa kuti usafunga nezvake.
2. Hachidzivisiki kufunga nezvomumwe munhu
Kunyangwe zvichinzwika kuvhiringidza, Paunonyanya kuedza kusafunga nezvemumwe munhu, ndipo paunonyanya kumufunga. Maererano nenyanzvi dzepfungwa, patinoedza kukanganwa nezvekare, tinowana zvinopesana. Tinoisa pfungwa dzedu pakusazvirangarira, saka unenge uchitofunga nezvemunhu iyeye.
Usazvimanikidzire, hazvidzivisiki kuti dzimwe nguva nguva idzodzo dzawakararama dzinouya mupfungwa. Simply usaore mwoyo nayo woenderera mberi.
3. Funga nezvako
Mukutsvaga kuti unzwisise kuti ungakanganwa sei waunoda, unogona kukudziridza zvinodhaka nekuda kwekushushikana, kuneta uye kusagadzikana. Kutarisana nezvose izvi Migumisiro yakaipa unofanira kuzorora uye kuzorora. Iwe unofanirwa kuziva izvo zvaunoda panguva ino uye uzvifukidze. Pfekedza, pfeka uye edza kusanyura mukusurukirwa kwako, eiye kuguma kwehukama ishanduko inokosha inofanira kuitwa nehutano nekushivirira .
4. Taura nemunhu waunovimba naye
Kuzvisunungura umene neshamwari yaunovimba nayo kunogona kubatsira munhu kukunda kusachengeteka kwake. Kutaura kunobatsira mwoyo wedu kurega chinhu chiri chose chatakatakura mukati uye kunorerutsa kunzwisisa kunetsa nefunganyo zvatinorarama. Edza kunzwisisa manzwiro ako saizvozvo ona mamiriro acho neimwe maonero.
5. Wana kufemerwa nevanhu vakakunda
Kupedza kurambana hakusi nyore, uye sezvingabvira uchanetseka kuzviita. Nzira yakanaka yekuona kuti kurambana uku kunogona kukurirwa ndeye kufemerwa nevanhu vatinoyemura uye vakambosangana nemamiriro ezvinhu akafanana. Neiyi nzira, tinogona kusundwa nokunzwisisa kuti vakakurira sei kuparadzana.
Unogona kuwana aya mareferensi mu:
Mawebhusaiti uye mablogiki: Kune zviteshi zvakagadzirirwa zvakanangana kuti vanyoreri vadzidze maitiro ekuva nehukama hune hutano, kusanganisira kugumiswa kwavo.
Mavhidhiyo kana zvinyorwa pamanetiweki: Kuve nzira yekukurumidza yekukurukurirana, isu tichagara tine mamwe mazano kubva kune mumwe munhu maitiro ekukanganwa nezvemunhu.
Mazano kubva kushamwari: Kana shamwari yepedyo yakambosangana nemamiriro ezvinhu akafanana, edza kutaura nayo uye kurudzirwa nokuchinja kwayakaita.
6. Shivirira marwadzo
Kunyangwe zvichiratidzika sezvisingabviri, Unozopedza marwadzo aunonzwa kubva pakurambana. Izvi zvinoda kuti iwe uremekedze kurwadziwa kwako uye urarame iyi nzira yekuparadzanisa wakadzikama. Sezvaunoedza kukurira marwadzo okuparadzaniswa nowaunoda, ita zvinhu zvinofadza uye tsvaka tsigiro yeshamwari dzako dzepedyo.
Uyewo, usazvienzanisa nomunhu akakwanisa kupedza kurambana nokukurumidza. Ipa pfungwa dzako nguva yekugadzirisa kuparadzana uku nenzira yakura uye ine mutoro.
7. Tarisa pane zvazvino
Yechinomwe zano rekuti ungakanganwa sei waunoda kwete kufungidzira ramangwana pamwe chete kana kubatirira kune zvakapfuura. Chikanganiso chakajairika ndechekufungidzira chokwadi chisingagone kuitika pachinzvimbo chekutarisa pane zvazvino uye kukura kwayo. Mukuwedzera, zvakakosha kuti unzwisise zvikonzero nei iwe wakarambana, kuongorora uye kuyeuka kuti mamiriro acho akanga asina kunaka uye hapana mumwe wenyu akanga akanaka.
8. Rangarira zvikanganiso zve ex wako
Kana taparadzana nemunhu tine tsika yekurangarira zvakanaka chete, asi yeuka kuti kana wazvisiya, imhaka yekuti hazvisi zvese zvainaka. Edza kudaro funga nezvezvikanganiso zvavo uye mafungiro asina kunaka kuti urege kudzokerazve kana kufungidzira ukama hwakakwana. Zvose izvi hazvirevi kuti unofanira kuzvivenga, kure nazvo, asi hazvirevi kuti unazvo paatari.
9. Isa mari mune zvaunoda
Chero bedzi mwoyo wako uchipora, unogona chengeta pfungwa dzako dzakanangidzirwa pazvinhu zvaunofarira. Unogona kudzokera kuzvinhu zvekare zvawafarira kana kuwana zvitsva zvinokufadza. Pamusoro pekunzwa kugutsikana, neiyi nzira unozotanga kuve nemaitiro uye mafaro izvo ex wako asingazopindire mazviri.
10. Usazvipa mhosva
Chikanganiso chakajairika kufunga kuti kurambana imhaka yako chete. Usanzwa uine mhosva Tichifunga kuti wanga usati wasvika pabasa, isu tiri vanhu vane zvikanganiso zvechisikigo uye vavariro uye, saka, isu tinowanzo kukanganisa. Zvakare, kusapindirana muhukama kunogona kudzinga vanhu.
Saka rangarira izvozvo mose makasarudza kuita sarudzo iyi uye kuti, kunyangwe zvichirwadza, mune ramangwana uchaona kuti chave chinhu chakanakisa chawaigona kuita.
11. Ita zvitsinga zvekukanganwa waunoda
Mukuda kupedza kurambana, vamwe vanoroya kuti vakanganwe nezvemunhu. Zvadaro, tinokupa muenzaniso wekuita:
Nyora zita rakazara remunhu waunoda kukanganwa pabepa jena.
Kanda pepa racho mumvura uye dzokorora mashoko anotevera katatu: “Pamakona erwizi urwu, ungwandangwanda hunomira. Wakanga uri muhupenyu hwangu sedanda. Murukova rwehupenyu, wapfuura.
Kuti uite tsika iyi unofanirwa kuve nekutenda kuti ichashanda. Zviri a kurovedza pfungwa kunokubatsira kukanganwa munhu uyu, kupfuura chitsinga uye chine kukosha kwekufananidzira kwekukunda nekukanganwa.
Pamusoro pezvitsinga, vanhu vazhinji vanotendeukira kumunamato kuti vakanganwe rudo irworwo rwakarasika. Muchidimbu, ndechimwe chiitiko chepfungwa kubvisa waimbova rudo kubva muhupenyu hwako. Mune mamwe mazwi, iko kufungisisa kubvisa marwadzo aunonzwa paunenge uchibata nemanzwiro uye hupenyu hwezuva nezuva.
Kunyangwe zvingave zvakaoma, kufunga kuti ungakanganwa sei waunoda zvichakunakira iwe. Ino ndiyo nguva yekuzvibatanidza isu uye nekuteerera kune zvatinoshuvira. Nepfungwa dzakajeka tinokwanisa kuzviyambira uye kukura sevanhu.
Tinovimba kuti chinyorwa ichi kubva chemada.online yakakubatsira uye, kana uri mumamiriro ezvinhu aya, yeuka kuti kutambura uku kuchapera. Mazuva ekutanga mushure mekurambana pamwe kunenge kwakaoma, asi iwe uchakurumidza kuwana zvaunoda kuti uwane pamusoro peumwe munhu.
Kuziva sei kuti rudo kana ushamwari
Ndoita sei kuti mukadzi ade iwe
Maitiro ekuve anoshamwaridzana uye vanhu sewe
Munamato wegwayana nyoro
Munamato kuSan Alejo
Munamato kuSanta Helena
Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri
Munamato kuna Saint Cyprian
Namata kuna San Marcos de León
Munamato kuna Santa Barbara
Munamato kuRufu Rutsvene rwemari
Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha
Munamato wekudzikamisa nekusimbisa munhu
Munamato wekubvisa ziso rakaipa
Munamato weRufu Rutsvene kutonga murume
Munamato wekutsvaga wakarasika zvinhu
Munamato wekurota neni
Munamato kuna satani
Munamato kuSan Ramón Nonato
Munamato wekubhadhara mari
Munamato kuna Saint Charbel
Munamato kuna amai vakafa
Munamato wekufunga nezvangu
14 mavhesi eBhaibheri evechidiki maKatorike
Munamato kuna Santa Muerte kuti mudiwa adzoke
Munamato weropa raKristu
Munamato wekuda kundifonera
Munamato weSanta Ignatius waLoyola
Munamato wekutumira pasina zvinonetsa
Munamato kuRufu Rwerudo rwekusakwanisa rudo
Nhumbi dzokurwa nadzo dzaMwari
Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo
Munamato weMutongi Akarurama
Munamato wekukwezva murume
Munamato kuSan Marcos de León inouya
Munamato kuna Santa Muerte webasa
Munamato kuna Mutendi Martin wePorres
Namata kuna Utatu hutsvene
Namata kuna Rufu Rutsvene kuti afunge nezvangu
Kunamata kune Vakaropafadzwa
Munamato kumweya wega kuti uite kuti munhu auye
Munamato kuMhandara yeMontserrat kune vakadzi vane pamuviri
Dai 31, 2020
Munamato kuna Saint Catherine weSiena
Dai 30, 2020
Dai 29, 2020
Munamato kuSan Roque
Dai 28, 2020
Dai 27, 2020
Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka
Dai 26, 2020
Munamato kuna Mutsvene Razaro
Dai 25, 2020
Munamato kuMhandara yeCarmen
Dai 24, 2020
3 minamato ine simba kuti adzore basa racho
Dai 23, 2020
Munamato wekutaurisa murume
Dai 22, 2020
Namata kuna St. Jude Thaddeus yematare akaoma uye anodikanwa
Dai 21, 2020
Munamato kuMhandara yeGuadalupe
Dai 20, 2020
Munamato wekuporesa kunetseka
Dai 19, 2020
Dai 18, 2020
Dai 17, 2020
Munamato wekuropafadza chikafu
Dai 16, 2020
Munamato wembwa inorwara | Namata nekutenda uye ubatsire kuporesa shamwari yako
Dai 15, 2020
Kuporesa munamato kuti udzore hutano hwako nekukurumidza
Dai 14, 2020
Munamato wekuti wangu ex adzokere
Dai 13, 2020
Nzira yekudzorera sei ushamwari hwakaputsika
IZVO dzidza KUDUDZIRA uremu Kuderedza uremu | HWANO KUSVIRA Bhaibheri HWANO Sei Mwari Miscellaneous Chinangwa Mitsara Ngano Mathematics Zviroto zvangu Minamato Popular Santos Uncategorized Zviroto Tables dzokufembera vachishandisa Whatsapp